အကယ်၍သာ ကျွန်ုပ်၏မီးဖိုချောင်တွင်နေရာအကန့်အသတ်မရှိပါကကျွန်ုပ်သည်မီးဖိုချောင်တွင် "ကစားစရာများ" အလုံအလောက်မရှိနိုင်ပါ။ ငါကြိုးစားခဲ့ပြီးသောနောက်ဆုံးတစ်ခုမှာဒိုးနတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးကြီးသည့်အရာမဟုတ်ပါ၊ ရလဒ်နှင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုမရှိနိုင်ပါ။ အဘယ်သူသည်အချို့ကိုခုခံတွန်းလှန် ချောကလက်ဒိုးနက်?
ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတွင်ချောကလက်ရှိသည့်အရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ ငါအလှူရှင်များကိုချစ်ပြီးဤသူတို့သည်ငါ၏မုန့်ဖုတ်ထဲမှာကဲ့သို့မစုံလင်ပေမယ့်သူတို့ကအရသာပါ၏ သူတို့ကိုသင်ကိုယ်တိုင်အောင်၏ကျေနပ်မှုကိုဖော်ပြရန်မ။ က သွေးဆောင်မှု ဘယ်လိုလဲ glazzed ဒိုးနက် ငါ၏အလုပ်ဖော် Ale ထံမှ။
260 gr မုန့်ညက်မုန့်ညက်
၁၅၀ ဂရမ်။ သကြားဓာတ်
200 gr မုန့် (35% mg)
50 ml ။ နို့
နေကြာဆီ3ဇွန်း
ဓာတုတဆေးကို 1 အထုပ်
ထို့နောက်နို့၊ ဆီနှင့်ဗင်အဆီအနှစ်နှင့်ပေါင်းထည့်သည် ကျနော်တို့ပေါင်းစပ်သည်အထိရိုက်တယ် အားလုံးပါဝင်ပစ္စည်းများ, မြန်နှုန်း2အပေါ် 3-3 မိနစ်
ကျနော်တို့ဂျုံမှုန့်ထည့်သွင်း နှင့်တဆေးကိုအပြီးသတ်ဖို့ spatula နှင့်အတူရောနှော။
ကျနော်တို့ကွာဟချက် grass ဒိန်ချဉ်၏ရေနံနှင့်မုန့်ညက်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ဇွန်းအနည်းငယ်၏အကူအညီဖြင့်မုန့်စိမ်းနှင့်အတူနီးပါးအစွန်းနီးပါးသူတို့ကိုဖြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အလှူငွေများကိုအဆင်သင့်ဖြစ်ရန် ၅-၆ မိနစ်ခန့်ကြာလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုထုတ်ယူ။ သူတို့ကိုအအေးကြကုန်အံ့။
ငါတို့ပြင်ဆင်နေစဉ် ချောကလက်အဖုံး, ကောင်းသော baci-Marie အတွက်ကောင်းသောမှောင်မိုက်မှောင်မိုက် (ကိုကိုး 70%) အရည်ပျော်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - ပိုင့်အံ့သြဖွယ်ပိုင့်ဒိုးနက်
အဘိတ်အချိန် 20 မိနစ်
ချက်ပြုတ်ချိန်6မိနစ်
စုစုပေါင်းအချိန် 30 မိနစ်
ဝတ်ပြုနှုန်း Kilocalories 500
ချက်ပြုတ်တာကကျွန်တော်ဟာကလေးဘဝကတည်းကအမေ့ရဲ့မြည်းဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ငါ့ရဲ့လက်ရှိအလုပ်၊ ချက်ပြုတ်တာနဲ့သိပ်မဆိုင်ဘူး ... ပရိုဖိုင်ကိုကြည့်ရန်>
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » ဟင်းလျာများ » အချိုပွဲ » ခံနိုင်ရည်ရှိသူချောကလက်ဒိုးနက်?
Ale Jimenez ဟုသူကပြောသည်
ဂရိတ်ပိုင့် compi !! ငါအိမ်မှာလုပ်ဖို့သင်စာရွက်ရလိမ့်မယ် !! Bss 😀
donut မပါဘဲဘယ်လိုသိနိုင်သလဲ။ ဖြစ်နိုင်လား သူတို့ကအများကြီးလိုချင်တယ် !!
ငါသင်၏သင်၏စာရွက်ကိုယူ။ သူတို့သည်ကြီးစွာသောထွက်လာကြပြီ ကျွန်ုပ်တွင်ဒိုးနတ်မရှိသောကြောင့် ၅ မိနစ်ပန်ကာလုပ်ဆောင်မှုအတွက် ၁၈၀ ºမီးဖို၌ပုံသွင်း။ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငါသည်သင်တို့၏စာရွက်ကိုငါ့ဘလော့ဂ်ကိုယူပါ။